Maraykanka, oo sheegay in duqayn ay ku dileen hoggaamiye katirsan Al-shaab. - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Maraykanka, oo sheegay in duqayn ay ku dileen hoggaamiye katirsan Al-shaab.
Maraykanka, oo sheegay in duqayn ay ku dileen hoggaamiye katirsan Al-shaab.
Saraakiisha Taliska Ciidamada Mareykanka ee Qaaraddan Afrika ayaa shaaciyey dilka hoggaamiyaha sare oo tatirsan Xarakada Al-Shabaab oo ay sheegeen in duqayn cirka ah ay ku dileen 25-kii bishii Ogosto ee sannadkan.
Hogaamiyaha Al-Shabaab, oo Maraykanku sheegeen in lagu magcaabo Abdulqadir Commandos, ayaa lala beegsaday duqeyn ka dhacday agagaarka deegaanka Saakow ee gobolka Jubbada dhexe ee Koonfurta Soomaaliya.
CabdulQaadir Kamaandoos, ayaa la sheegay in xilal badan uu ka qabtay Xarakada Al-Shabaab.
“Howlgallada duqeyntan waxay muhiim u tahay hoos u dhigista awoodda ay u leeyihiin rabshadaha ka socda Soomaaliya iyo meelo ka baxsan,” ayuu yiri Gen. Stephen Townsend oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika. oo sheegay inay sii wadayaan cadaadiska Al-shabaab.
Geesta kale Al-shabaab weli kama ay hadalan duqayntan Maraykanku sheegay in uu ku khaarajiyay hoggaamiye katirsan.
Laga soo bilaabo bishii Jannaayo, Taliska Ciidamada Mareykanka ee Afrika , ayaa sheegay in ay fuliyeen 46 weerar oo cirka ah si loo yareeyo dagaalyahannada Al-Shabaab.
Madaxweyne Farmaajo, oo baaq u diray Qoor-qoor, Waare iyo Laftigireen.
Wasiirrada Arrimaha dibadda Jaamacadda Carabta oo maanta ka shiraya heshiiskii Imaaraadka iyo Israel.
Dhagaxyadii Ku jarnaa jidadka Muqdisho oo inta badan la qaaday